कांग्रेस गण्डकी निर्वाचन परिणामः शुक्रराजको जीतले पौडेल-शशांकको साख जोगियो, देउवालाई मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश (मतसहित) – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun कांग्रेस गण्डकी निर्वाचन परिणामः शुक्रराजको जीतले पौडेल-शशांकको साख जोगियो, देउवालाई मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश (मतसहित) – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
कांग्रेस गण्डकी निर्वाचन परिणामः शुक्रराजको जीतले पौडेल-शशांकको साख जोगियो, देउवालाई मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश (मतसहित)
१९ मंसिर २०७८, आईतवार १२:५८
कांग्रेस गण्डकी अधिवेशन
पोखराः यस अघि अपेक्षागरिएजस्तै संस्थापनइतरका उम्मेदवार हावी हुँदा कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिमा शुक्रराज शर्माको अधिकांश टिमका सदस्य विजयी भएका छन् ।
यसले साविकदेखि पकड रहेको ठानिएको प्रदेशमा संस्थापनइतरका नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. शशांकलाई आफ्नो पकड बलियै रहेको सन्देश दिएको छ । सदस्यको परिणाम आउनुअघि महामन्त्रीसहितका अधिकांश पदमा इतर खेमा विजयी हुनुले चुनाव अघि बढि नै सक्रिय यी दुई नेताका अलावा संस्थापनइतरका अरु नेतालाई राहत दिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै मत भएको कास्कीबाट टिकट पाएका पुराना नेता शुक्रराज शर्माले पाएको ६ सय १२ मत पाउँदा अर्जुन जोशीको ५ सय २८ रह्यो । ८४ मतान्तरले विजयी शर्माले आफ्नो मात्र नभएर आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने खेमा र भावी सभापतिका समेत दावेदारहरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको साख जोगाइदिएका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा व्यक्तिगत प्रभावका कारण यस अघि अनुमान गरिएको करिब डेढ सय मतले हार्ने प्रक्षेपण चिर्न जोशी सफल भए । अरु पदको अन्तरका आधारमा पनि संस्थापन प्यानलले मत घाटाको समीकरण पुरा गर्न गरेको मेहनतले काम गरेको देखिए पनि परिणम आफ्नो पक्षमा नपर्नुले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश दिएको ।
सदस्यको परिणाम आउनुअघि महामन्त्रीसहितका अधिकांश पदमा इतर खेमा विजयी हुनुले चुनाव अघि बढि नै सक्रिय यी दुई नेताका अलावा संस्थापनइतरका अरु नेतालाई राहत दिएको छ ।
अरु पदको अन्तरका आधारमा पनि संस्थापन प्यानलले मत घाटाको समीकरण पुरा गर्न गरेको मेहनतले काम गरेको देखिए पनि परिणम आफ्नो पक्षमा नपर्नुले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
उप सभापतिबाहेक शुक्रराज प्यानल विजयी
उपसभापतिमा स्याङजाकी कल्पना तिवारी र मेखलाल श्रेष्ठ विजयी भए । कल्पनाको ६ सय २४ र श्रेष्ठको ५ सय ५६ मत आएको छ । श्रेष्ठ संस्थापनको प्यानलबाट हुन् भने अरु सबै इतर प्यानलबाट उम्मेदवार थिए ।
महामन्त्रीमा किरणबाबु श्रेष्ठले ५ सय ७३ तथा नवलपुरका विष्णु लामिछाने निकटमै रहेर विजयी भए । विष्णुले ५ सय ६७ मत पाए । संस्थापन पक्षका कुमार खड्काको ५ सय ५६ र ईश्वर पाण्डेको ४ सय ५८ मत आयो ।
सहमहामन्त्री तर्फ महिलामा कोपीला रानाभाटले ५ सय ५२ मत सहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी ओमकला गौतमको ५ सय १४ मत आयो ।
सहमहामन्त्रीकै खुलामा रमेश पाण्डे ६ सय १८ मत र दोश्रोमा रामचन्द्र जोशी ५ सय ६९ मत सहित संस्थापनइतरबाट विजयी भए । प्रत्यासी संस्थापनका झुलबहादुर आलेले ४ सय ८८ र राजनराज पन्तले ४ सय ३१ मत पाए ।
सदस्यको मतगणना जारी रहँदा संस्थापनइतर प्यानल नै अधिकांश पदमा अगाडि रहेको मत प्रवृत्तिले देखाएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १९ मंसिर २०७८, आईतवार १२:५८ 101 Viewed